एमाले–माओवादी एकता प्रयासबारे डा.विष्णुहरि नेपालको टिप्पणी, गरे यस्तो भविष्यवाणी !::Pathivara News
एमाले–माओवादी एकता प्रयासबारे डा.विष्णुहरि नेपालको टिप्पणी, गरे यस्तो भविष्यवाणी !
उत्पादनका पक्षहरुलाई समाजवादी ढाँचामा ढाल्नुपर्ने तर्क गर्दै त्यसले मात्र औधोगिक विकास सम्भव भएको डा.नेपालको तर्क थियो । चीनमा माओवादकै आधारमा आर्थिक रुपान्तरण भएको बताउँदै उनले माओले आफ्नो देशका युवाहरुलाई बाहिर जानबाट रोक्नुभएकोले चीनले आर्थिक रुपान्तरणमा विशाल फड्को हान्न सकेको उदाहरण दिए । देङ सियायो पिङले माओवादको आधार जन्मिएको आर्थिक क्रान्तिको ढाँचाको विज्ञापन(मार्केटिङ) मात्र गरेको बताउँदै डा.नेपालले त्यसबाट हामीले सिक्नुपर्ने बताए ।
कार्यकारी राष्ट्रपति हुनका लागि २५ देखि ७० वर्षको उमेर उपयुक्त हुने तर्क गर्दै उनले संविधान संशोधन गरेरै भएपनि यो व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए । यद्यपि, आलंकारिक राष्ट्रपतीय प्रणालीमा गए ७० वर्षभन्दा माथिको उमेर हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । आलंकारिक राष्ट्रपति सबैले सम्मान मात्रै गरे हुने खालको पद भएकोले त्यसरी मिलाउन सकिने डा.नेपालको तर्क थियो ।